त्यहाँ जसलाई यो प्रकृति दिएको छ ती मात्र गाउन सक्षम छ कि एक राय छ। हो, यो साँच्चै सत्य हो। तर हामी प्राकृतिक क्षमता बिना मान्छे राम्रो गाउन सिक्न सक्नुहुन्छ, र सुरुमा राम्रो आवाज छ गर्नेहरूलाई, तपाईंले आफ्नो उपहार गुमाउन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सन हुँदैन। मान्छे आवाज बलियो जो विशेष अभ्यास महत्त्व बारेमा भूल र कसरी, सही सास फेर्न ठोस र यति मा लागू सिक्न मदत गर्दा उत्तरार्द्ध अक्सर हुन्छ।
आवाज कसरी विकास गर्ने? यो प्रश्न धेरै गर्न चासो छ। निस्सन्देह, साथीहरूसँग एउटा गीत गाउन, र त मिनी कन्सर्ट जारी गर्न आग्रह गरिएको थियो गाउन राम्रो। अझै पनि कम से कम केही परिणाम हासिल गर्नेछ ढिलो प्रयास गर्नुहोस् वा पछि। गायन लागि आवाज विकास गर्ने बारे कुरा, यो तिनीहरूलाई बिना यो सुन्दर गायन गर्न असम्भव छ किनभने विशेष ध्यान, श्वास, ध्वनि, पिच, articulation तिर्न महत्त्वपूर्ण छ। कुरा चाँडै र सजिलै काम गर्नेछ भन्ने लाग्छ छैन। प्रयासमा धेरै गर्न हुनेछ।
कसरी आवाज विकास गर्न
सुन्दर गाउन गर्न असम्भव छ, जो बिना ती घटक मा गरौं पहिलो ध्यान। गरेको पनि सास सुरु गरौँ।
को inhalation तीव्र, बिजुली-छिटो, तर एकै समयमा धेरै शान्त हुनुपर्छ। पाठ गाइरहेका लिएको कहिल्यै गरेका लगभग सबै मान्छे, एक गहिरो सास inhaling जब डायल गर्न प्रयास गर्नुहोस्। परिणाम के हो? फलस्वरूप, तिनीहरूले गाइरहेका बेला निसासिने गर्न थाल्छन्। सम्झना: ब्लोट inhaling जब पेट गर्नुपर्छ, छाती सधैं स्थिर रहन्छ। कसरी आवाज राख्न? व्यायाम यहाँ विभिन्न हुन सक्छ। निम्नानुसार सही कसरी सास फेर्न गर्न सिक्दै: पर्खाल विरुद्ध उठ, उनको पेट, एक गहिरो सास र तेज नाक मा आफ्नो हात राखे। एकै समयमा पेट अगाडि धक्का - हातमा यो महसुस गर्न आवश्यक छ। यो मुख मार्फत एक ढिलो Exhale पछि छ। हात पेट साथ सँगै उतरती।
यो व्यायाम गरेर, तपाईं आफ्नो सास नियन्त्रण र दायाँ लिन सिक्न।
गाइरहेका बेला महत्त्वपूर्ण articulation छ। याद गर्नुहोस्, शैक्षिक गायक गाउन: आफ्नो मुख सधैं खुला व्यापक छन्। के तपाईं साँच्चै आवाज कसरी विकास गर्न सोच छ भने, यो गाइरहेका बेला उनको मुख खोल्न सिक्नुपर्छ।
व्यायाम निम्नानुसार: को दर्पण जाने र स्वरवर्णको उच्चारण गर्न सुरु, अधिकतम आफ्नो मुख खोल्ने र बित्तिकै तपाईं रूपमा आफ्नो ओठ सार्दा। सुरुमा यो धेरै हास्यास्पद देखिन्छ, तर मलाई विश्वास हुनेछ - त्यस्तो व्यायाम को लाभ ठूलो छ। तिनीहरूलाई गाउन गर्न प्रयास गर्न Accustomed। त्यसपछि अझै पनि articulating, कुनै पनि गीत सिक्न सुरु गर्नुहोस्। निस्सन्देह, मित्र को चक्र मा काम गरिरहेको, कुनै एक एक ओपेरा गायक रूपमा articulates, तर यो मुख बन्द संग गायन सुन्दर छ कि सम्भव छैन सम्झनुहुन्छ लायक छ।
यसलाई जो बिना कुनै पनि गीत सुक्खा र अनिच्छुक हुनेछ भावना, Timbre, र अरू सबै कुरा, सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईं गाइरहेका छन् के बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। काम महसुस, यो हो, जहाँ तपाईं जोर गाउन छ स्थानहरुमा, र कतै शान्त पहिचान।
एक राम्रो तरिकाले मात्र सुनुवाइ कम्तिमा केही प्रकारको गर्नेहरूलाई भजन गाउन सक्छौं कि भूल छैन। तपाईंले यसलाई छैन? यसलाई विकास गर्न एकदम सम्भव छ किनभने, चिन्ता छैन। सुरु गर्न, तपाईंले गाउन के सुन्न सिक्न। तपाईं गाइरहेका सुरू गर्नु अघि, मेरो टाउको मा माधुर्य स्क्रोल गर्न कहाँ यसलाई र कहाँ तल जान्छ, निर्धारण निश्चित गर्नुहोस्। सुनुवाइ गाइरहेका तराजू, कर्डहरु, अन्तरालहरू को माध्यम द्वारा सम्भव छ विकास।
आवाज कसरी विकास गर्ने? माथिको सबै बाहेक, म सकेसम्म धेरै गाउन सुझाव चाहन्छु। अभ्यास सधैं महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो साँस मा मात्र गाउन। यो घाँटी तल कम सिफारिस गरिएको छ। मापनहरू र अन्तरालहरू, माथि उल्लेख रूपमा, मात्र सुनेपछि तर पनि आवाज नै विकास गर्न मद्दत गर्नेछ। आवाज कसरी विकास गर्न सोच, (ट्युटोरियल मैनुअल, आदि) साहित्य मा अभ्यास को एक किसिम पाउन सक्नुहुन्छ। यो अभ्यास धेरै हुनेछ, तर thrust अझै पनि सफल हुनेछ। खराब मान्छे हुन छैन।
जूलिया Karaulova: जीवनी र गायक को व्यक्तिगत जीवन
मार्क Bolan, समूह टी Rex को नेता: जीवनी, रचनात्मकता
Aydar Gainullin: जीवनी र काम
पावेल Monchivoda: जीवनी र काम
"बालकनी" (रेस्टुरेन्ट, मास्को): वर्णन, मेनु, मूल्य, समीक्षा
मास्को मा Sukharev टावर
इन्टरनेटमा एक विज्ञापन अभियान योजना
को प्रेरणा मोटर को उपकरण र सञ्चालन सिद्धान्त। Asynchronous मोटर प्रकार: काम सिद्धान्त, वर्णन र कार्य
आफ्नो हातले वैक्यूम ट्यूब प्रवर्धक: चरण निर्देशनहरूको, चित्र, सामाग्री द्वारा चरण
साइबेरियन बिरालो नस्ल
आहार लागि आदर्श छ जो ब्रोकोली सूप, को क्रीम कसरी खाना पकाउनु।